गाजरको सेवनले मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्ने वैज्ञानिकहरुको पुष्टि | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्वास्थ्य गाजरको सेवनले मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्ने वैज्ञानिकहरुको पुष्टि
गाजरको सेवनले मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्ने वैज्ञानिकहरुको पुष्टि
२२ माघ २०७५, मंगलवार १५:०७
गाजर जमीनमुनि रहेको जरा रूपान्तरित भई केही मोटो हुने वनस्पति हो । यसको जरा खाद्यपदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । गाजरका विभिन्न फाइदाहरु छन् । बैज्ञानिकहरुले गाजर खानामा समावेश गर्दा मटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न सकिने यसअघि नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।
गाजर खानाले दाँतको दोहोरो बचाव हुन्छ । जसका कारण गाजरलाई धेरैबेला सम्म चपाउने गरिन्छ मुखमा प्रसस्त मात्रामा र्याल निस्किन्छ । यसका साथै गाजर खानाले गिजा तथा दाँतको भित्रि भागहरुमा मसाज हुनुका साथै उक्त स्थानमा रगत संचार नियमित रुपले हुनथाल्छ ।
दैनिक एउटा गाजर खानाले दाँतको आयु बढ्ने तथा दाँत स्वस्थ तथा सुन्दर देखिन्छ । खाना खाएपछि एउटा गाजर खानाले हाम्रो दाँतलाई मजबुत बनाउनुका साथैदात चम्किलो बनाउने कामपनि गाजरले गर्दछ ।
हालसालै गरिरिएको एक अध्यननले गाजर खाने महिलाहरुमा भविष्यमा हुनसक्ने स्तन क्यान्सरको सम्भावना ६० प्रतिशतले कम हुने देखाएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार गाजरमा प्राकृतिक रुपमा पाइने रसायनले क्यान्सरको सम्भावनालाई घटाउँछ । अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रेसनमा प्रकाशित एक रिपोर्टले स्तन क्यान्सरका लागि गाजरको प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको उल्लेख छ । सो अध्ययन अनुसार गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखी ६० प्रतिशत कम हुने देखाएको छ ।
गाजरमा यो बाहेक अन्य पनि थुप्रै फाइदाहरु छन् । यसमा पाइने विटा क्यारोटिनलाई शरीरले भिटमिन ए मा परिवर्तितगरि आँखा तेजिलो पनि बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसको साथसाथै रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन पनि गाजरले मद्दत गर्छ । Agency
उपचार ढिलाे भए ज्योति गुम्छ
गर्मी मौसममा किन मेवा खाने ? यस्ता छन् अचुक फाइदा !
तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर पिउनुको फाइदा